khankanya: UkuJongwa kweMithombo yeendaba noLawulo kwenziwa ngokuLula Martech Zone
khankanya: UkuJongwa kweMithombo yeendaba kunye noLawulo kwenziwa ngokuLula
NgoLwesine, Septemba 5, 2013 NgoMvulo, Juni 23, 2014 Douglas Karr
Todd Ingqolowa, intloko yobunkokeli bokucinga Iinkonzo zeKelly, kutshanje ubhale ngokukhankanywa kwisithuba esivela kuMvavanyi weendaba zeNtlalontle, Izixhobo zeMithombo yeendaba ezili-14 ezisetyenziswa ziiNgcaciso zeNtengiso. ukukhankanywa kuluvo olubanzi lwezentlalo kunye neqonga lokujonga imithombo yeendaba.
ukukhankanywa kwaveliswa njengotshintsho olusebenzisekayo lwezilumkiso zikaGoogle. Ngumzekelo weencwadi zezifundo zendlela yokwakha iqonga ngokwenza into ebhetele kunaye nabani na ongomnye. Kananjalo ukuba uvuyo lokuyisebenzisa, ithatha ezinye ezininzi, i-ahem, 'ikhankanya' kwi-Intanethi kunalo naliphi na iqonga endikhe ndalisebenzisa ukuba ibe sisixhobo sam # 1 sokuya kwisixhobo sokukhankanya ekuhlaleni. Todd Ingqolowa
Iimpawu eziphambili zokukhankanywa
Zonke iifowuni -Ukufikelela kukhankanywa naphina. Sebenzisa iapp yewebhu, usetyenziso lweChannel, uguqulelo lwedesktop lwePC, iMac okanye iLinux okanye uguqulelo lweselfowuni kunye neeapps ze-iPhone okanye ze-Android.
Imidiya kunye noHlolo lwezeNtlalontle -Gada izigidi zemithombo yolwimi ngeelwimi ezingama-42 kwaye uqiniseke ukuba awuphoswa nayiphina into epapashiweyo kunxibelelwano lwasentlalweni, iisayithi zeendaba, iiforamu, iibhlog okanye naliphi na iphepha lewebhu.
Umsebenzi weQela -Yakha iqela lakho, yabelana ngezilumkiso zakho kwaye unike umsebenzi kumalungu eqela lakho: cela umphathi wakho wasekuhlaleni ukuba aphendule kwi-tweet, cela i-CMO yakho ukuba inike ingxelo kwiposti yebhlog, kwaye ugcine umkhondo wezenzo zabantu bonke.
Izilumkiso zexesha lokwenyani -Lumkiswa ngexesha-lokwenyani ngokusebenzisa izaziso zokutyhala. Fumana umyalezo we-imeyile wemihla ngemihla okanye weveki. Musa ukuchitha naliphi na ixesha. Phendula ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Zibandakanye ekuhambeni -Dibanisa iiakhawunti zakho zentlalo (iFacebook, iTwitter) kwizilumkiso zakho kwaye uphendule ngaphandle kokushiya isicelo. Phinda ubhale kwakhona ukukhankanya, uthanda okanye wabelane ngokukhankanywa okuhle kwiphepha lakho le-Facebook, thumela ukukhankanywa nge-imeyile, njl.
basemoyeni -Susa ingxolo evela kwii-homonyms kunye ne-spams. Fumana lula ukukhankanywa okubalulekileyo. Fumana ithoni yokukhankanywa kwakho. Zonke iitekhnoloji zethu zifunda kwindlela oziphethe ngayo.
Izibalo kunye nesixhobo sokuthumela ngaphandle kwedatha -Fumana umfanekiso okhawulezayo wokukhankanywa ngumthombo, ulwimi nangaphezulu kwexesha elikhethiweyo. Yenza ingxelo zePDF kunye nedatha yokuthumela kwelinye ilizwe kwi-CSV. Thelekisa wena nabo ukhuphisana nabo.
Kukho i Inguqulelo yeshishini yokukhankanywa, nayo, ebonelela ngolawulo lwekhonsoli, intsebenziswano, ukwabelana ngeakhawunti yoluntu kunye nolawulo lweqela.
tags: Shishiniukubalulaukubeka iliso kwimidiya yoluntuIntsimi yengqolowa
Isiphene kuChongo lwaBantu kuGoogle- kunye nengozi